FAQs - Ningbo Madacus Printing Co., Ltd.
F1: orinasa mpamokatra entana na varotra ve ianao?
Mpanamboatra matihanina manana traikefa mihoatra ny 21 taona any Ningbo City, Sina izahay.
F2: Inona ny habetsaky ny kaomandinao ambany indrindra?
Valiny: 1000 ny MOQ anay
F3: Inona avy ireo fampahalalana ilaina omena amin'ny teny nindramina?
Azafady mba omeo ny habetsaky ny vokatrao, ny habeny, ny pejy fonony sy ny soratra, ny loko amin'ny lafiny roa amin'ny takelaka (ohatra, ny loko feno amin'ny lafiny roa), ny karazana taratasy ary ny lanjan'ny taratasy (oh: taratasy kanto mamirapiratra 128gsm), ny famaranana (ohatra: glossy / lamination matt, UV), fomba mamatotra (ohatra: fatorana tanteraka, fonosana).
F4: Rehefa mamorona ny kanto isika, karazana format manao ahoana no azo anaovana pirinty?
-Ny malaza: PDF, AI, PSD.
-Ny haben'ny rà: 3-5mm.
F5: Afaka mahazo santionany ve aho alohan'ny hametrahana baiko? Ahoana ny amin'ny famokarana betsaka?
-Ny santionany maimaimpoana raha tahiry, entana ihany no ampandoavina. Sampana manokana araka ny volavolanao sy ny zavatra takinao, ilaina ny vidin'ny santionany, mazàna ny vidin'ny santionany dia azo averina aorian'ny fametrahana ny filaminana.
-Ny santionany leadtimer dia manodidina ny 2-3 andro, ny fotoana fitarihana ho an'ny famokarana betsaka mifototra amin'ny habetsahan'ny filaminana, famaranana sns sns, mazàna 10-15 andro fiasana dia ampy.
F6: Afaka manana ny mombamomba anay na ny fonosana momba ny vokatrao ve izahay?
Azo antoka, ny Logo anao dia afaka aseho amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanontana, UV Varnishing, Hot Stamping, Embossing, Debossing, Pirinty amin'ny lamba landy na sticker iray eo aminy.